Ihe ncheta kachasị mma nke 5 maka gam akporo | Gam akporosis
Ngwa kacha mma gam akporo iji mepụta ihe ncheta
Ekwentị gam akporo anyị na-enye anyị ọtụtụ ọrụ, na ndepụta ahụ na-eto oge. Otu n'ime ọtụtụ ọrụ anyị nwere ike iji ngwaọrụ dị ka njikwa ọrụ. Anyị nwere ike iji ekwentị ka anyị ghara ichefu ihe ọ bụla. Yabụ, anyị na-edekọ ihe anyị ga-eme na atụmatụ anyị. Iji mepụta ụdị ọrụ ndị a, anyị chọrọ ngwa kwesịrị ekwesị.
Kechioma anyị nwere ọtụtụ ngwa nke ụdị a maka gam akporo. N'iburu nke ahụ n'uche, anyị hapụrụ gị n'okpuru na mkpokọta ya na kacha mma ncheta ngwa. Yabụ, anyị na-eburu nhọpụta na nkwa anyị n'uche.
Ihe kacha mma banyere ngwa ndị a niile anyị ga - egosi gị ọzọ bụ na ha dị mfe mmemme. Ya mere ojiji ya adighi edebe ihe omimi obula. N'ihi ya, ha ga-enyere gị aka ichetara gị ihe ndị kacha mkpa.
2 Ndepụta Ọrụ
3 Tinye akà rà
4 D Ihe edeturu
5 Ncheta Atlas
Otu n'ime nhọrọ zuru oke n'ime ụdị ngwa ndị a. Ọ pụtara ìhè karịa ihe niile maka ya imewe Ihe eji eme ihe. Na mgbakwunye, anyị nwere ọtụtụ nhọrọ ịhazi ya na ya. Anyị nwere ike ịmepụta ihe ncheta maka otu ihe mere eme ma ọ bụ ụfọdụ ndị a na-eme kwa oge. Yabụ n'ụzọ a anyị nwere Kpọmkwem ịchịkwa anyị burukwa na ụbọchị anyị taa.
La nbudata ngwa gam akporo n'efu. Ọ bụ ezie na anyị na-ahụ mgbasa ozi n'ime.
Taskeet - Nchetara & Mkpu
Developer: Mmepe Leviway
Ọ bụ otu n'ime nhọrọ zuru ezu na anyị nwere ike ịchọta taa. Ọ pụtara ìhè maka imepụta ya dị mfe, mana ọ na-enye anyị ọtụtụ nhọrọ. Dị ka anyị nwere ụdị nile nke kindsma Ọkwa (ọbụna kwuru), na mgbakwunye na Wijetị. Ọ kwesịkwara kwuru na ọ na-enye mekọrịta na google. Na mgbakwunye, ọ na-enye anyị ohere idezi ihe ncheta na otu. Ọ na-emezu ọrụ ya n'ụzọ zuru oke na anyị agaghị echefu ọrụ ndị ahụ.
La na nbudata a ngwa n'ihi na gam akporo bụ free. Agbanyeghị, n'ime anyị na-achọta ịzụrụ.
Developer: Ngwa mara mma
Ngwa a na-elekọta mepụta ndepụta ọrụ ebe anyị nwere ike itinye ihe niile anyị ga-eme. Na mgbakwunye, ọ na-enye anyị ohere ịbanye ncheta nke ga-apụta n'oge ụfọdụ. Ihe kachasị mma bụ na ọ nwere mwekota kalenda, ihe na-eme ka ọ dị mfe ịchịkwa ihe niile. N'ihi ya, ọ bụ nnọọ visual na mfe ịhụ anyị burukwa na ọrụ ndị anyị na-echere.
La nbudata ngwa gam akporo n'efu. Agbanyeghị, n'ime anyị na-ahụ ịzụrụ iji nweta ụfọdụ ọrụ ndị ọzọ.
TickTick-Aufgaben gee ntị
D Ihe edeturu
Ọ bụ njikwa na-enye anyị ohere ịhazi na mepụta ncheta n'ụzọ dị mfe. Ọ na-apụta maka imepụta ya, ọhụụ nke ọma yana yana agba na-eme ka ọ dị mfe ịhazi ihe niile. N'ihi ya, ọ bụ ezigbo ntụsara ahụ. Na mgbakwunye, o nwere mwekota na Google Ugbu a, wijetị na nkwado TTS. Mana, yana nhọrọ ndị ọzọ dịka ịmeghe ihe edeturu site na iji akara mkpisiaka.
La na nbudata a ngwa n'ihi na gam akporo bụ free. Na mgbakwunye, n'ime ya enweghị ịzụrụ ma mgbasa ozi.
Ihe edeturu D -Smart & Ihe -Notensi na Ime -Gee ntị
Developer: Damien van denBerg
Nhọrọ ọzọ dị mma ịtụle nke ahụ guzo maka atụmatụ ya dị mfe ma dịkwa mma. Yabụ ọ bụ ezigbo nhọrọ ma ọ bụrụ na ị na-achọ ihe dị mfe ma na-enye gị ohere ijikwa ọrụ ga-adị nkasi obi. Ihe niile na-egosi mgbe niile dị ezigbo mma ma doo anya. Anyị nwere ike ịmepụta ọrụ ma tọọ ozi ịdọ aka na ntị iji mezuo ha niile. O nwere ike ịbụ ihe kachasị mfe na ndepụta niile.
La na nbudata a ngwa n'ihi na gam akporo bụ free. Agbanyeghị, anyị na-ahụ ịzụrụ ihe n'ime ya.
Developer: Atlas Uru
Nke a bụ nke anyị nhọrọ na ngwa kacha mma ncheta. Ha niile kwụpụta maka inwere onwe ha yana dịkwa mfe iji. Ya mere ha niile bụ ezigbo nhọrọ iji wụnye na ngwaọrụ gam akporo gị. Isi ihe dị iche dị na ọrụ ndị ọzọ na onye ọ bụla n’ime ha gụnyere. Ọzọkwa imewe, Ebe ọ bụ na enwere ike ịnwe onye nhazi ya dị mma karịa ma ọ bụ na-amasị gị karịa. Kedu ihe ị chere maka nhọrọ nke ngwa a?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Ngwa kacha mma gam akporo iji mepụta ihe ncheta
Amaghị m nke n'ime ngwa ndị a na-enye m ohere, ọ bụrụ na ekwentị mkpanaaka ma ọ bụ ọnwụ ebe nchekwa ma ọ bụ ndị ọzọ, enwere ike ịbanye mgbe m na-ebudata ngwa ahụ ọzọ. Nke ahụ bụ, mgbe ị tinyere ngwa ahụ ma ọ bụrụ na ehichapụ ya, ịnwere ike iweghachite ụbọchị. Kedu nke n'ime ha nwere ụdị nke ngosi ahụ gosipụtara na ihuenyo niile? Ọ bụ na m nweela oke ọhụụ ma m hapụrụ ọkara ederede, ma ọ bụ ọkwa.
Galaxyfọdụ Galaxy Note 8 amalitela ịnata nsụgharị ikpeazụ nke gam akporo Oreo